कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या २१ हजार नाघ्यो, चौबीस घण्टामा कुन देशमा कतिले ज्यान गुमाए ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
काठमाडौं । विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या २१ हजार नाघेको छ।
गएको २४ घन्टामा मात्रै यसको संक्रमणबाट विश्वभर २२ सय ९७ को मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन्।
यो सँगै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या २१ हजार २०० पुगेको छ। यो तथ्यांक बिहीबार बिहान साढे सात बजेसम्मको हो।
कोरोना भाइसका कारण विश्वभर हाल ३ लाख ३३ हजार २ सय ३५ जना संक्रमित छन्।
गएको २४ घन्टामा सबैभन्दा बढी इटालीमा ६ सय सय ८३ जनाको मृत्यु भएको छ।
कोरोना भाइरसको उद्गम थलो चीनमा भने गएको २४ घन्टामा यसको संक्रमणबाट ६ जनाले ज्यान गुमाएका छन्।
गएको २४ घन्टामा इटालीपछि स्पेनमा धेरैको मृत्यु भएको छ। स्पेनमा एकैदिन ६ सय ५६ जनाले ज्यान गुमाएका छन्।
त्यसैगरी अमेरिकामा १५५, इरानमा १४३, जर्मनीमा ४७, फ्रान्समा २३१, युकेमा ४३, नेदरल्याण्डमा ८०, स्वीटजरल्यान्डमा ३१, दक्षिण कोरियामा ६, अस्टे«लियामा ३, बेल्जियममा ५६, क्यानाडामा १०, नर्वेमा २, पोर्चुगलमा १०, अस्ट्रियामा २, स्वीडेनमा २२, ब्राजिलमा १३, इजराइलमा २, टर्कीमा १५, इजरायलमा २, मलेसियामा ४ जनाले एकै दिनमा ज्यान गुमाएका छन्।
उत्तर कोरियामा कोरोना भाइरस भित्रिएकै छैन त ? जोगिन के गर्‍यो, दावी सत्य हो त ?
काठमाडौं । उत्तर कोरीयाले आफ्नो देशम एक जनालाई पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण नभएको दाबी गरेको छ। उत्तर कोरियाको […]
काठमाडौं । कोरोना भाइरसबाट एकैदिन ५ हजार भन्दा बढिको मृत्यु भएको छ । विश्वमा ज्यान गुमाउनेको संख्या ४७ हजार […]
काठमाडौं । विश्वभर कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मर्नेको संख्या ५९ हजार नाघेको छ । शनिबार बिहानको तथ्यांक अनुसार […]
कोरोनाबाट एकै दिन ३५ सयको मृत्यु, ६६ हजार बढी नयाँ संक्रमित थपिए
काठमाडौ । कोरोना संक्रमणबाट एकै दिन ३५ सय भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन्। शनिबार एकैदिन विश्वभर ज्यान […]
काठमाडौं । अमेरिकामा गएको २४ घन्टामा कोरोना संक्रमणबाट पाँच सय ६५ जनाको मृत्यु भएको छ। सोमबार एकैदिन […]